प्रदेश सभाको समानुपातिक सांसदमा कांग्रेसबाट को-को भए छनोट ? (सूचीसहित) – Online National Network
प्रदेश सभाको समानुपातिक सांसदमा कांग्रेसबाट को-को भए छनोट ? (सूचीसहित)
काठमाडौं,१५ पुस – कांग्रेसले प्रदेश सभामा समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको नामावली सार्वजनिक गरेको छ । निर्वाचन आयोगले दिएको अन्तिम समयसिमामा कांग्रेसले प्रदेशसभा तर्फका समानुपातिक सांसद्को नाम तय गरेको हो । नेपाली काँग्रेसले प्रदेश सभाको लागि समानुपातिक तर्फबाट सांसद बनाउने नाम निर्वाचन आयोगलाई पठाएको छ। निर्वाचन आयोगमा दिउँसो नै पार्टीको तर्फबाट पत्र दर्ता भएको थियो। नाम भने राती मात्र पार्टीले बुझाउन सकेको हो।